Waxyeelada Ay Daawooyinku Ku Keenaan Hooyada Uurka Leh Iyo Ilmaha Ay Sido - Daryeel Magazine
Waxyeelada Ay Daawooyinku Ku Keenaan Hooyada Uurka Leh Iyo Ilmaha Ay Sido
Kulanti wanaagsan akhristayaal dhamaantiin waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qormo ku saabsan dhibaatada ama waxyeelada ay daawooyinku ku keenaan hooyada uurka leh Sidaynu wada ogsoonahay hooyadau waxay soo martaa marxaldo kala duwan oo caafimaad , howba sii darnaato markay uurka leedahay. Hooyadu markay uurka yeelato waxaa isbedela dhamaan unugyada, nudayaasha, iyo xubnaha jidhkeeda usamaysanyahay iyo waliba siday ushaqeyaan
Hooyadu markay leedahay uurka waxa lasoo daaaya dheecaano farabadan kaas oo uusababaayo uurka hooyadu leedahay. Waxa maragmadoona in ay hooyadu ay nafteeda ka ilaalin ogatahay ta ilmaha uurka aykusido ee uurjiifka ah ee ilaahay ku arsaaqay una ilaaliso si aan hagrasho la,aana Hadaba waxaa halkan idinku soo gudbinaynaa waxyeelada doowaooyinka qaar ugaystaan hooyada uurka leh iyo ilmaheeda uurjiifka ah. Sidaynu wada ogsoonahay ama kawada warqabno daawadu waa seef laba afleh. Hadaba hadaad daawada u isticmaasho si wanaaagsan kuna haboon cabashadaadi waxbay ku taraysaa hadii alle cafimaad kugu talo galay caafimaad.
Balse hadii aad iska isticmaasho daaawo oo aad iska miisato adigu , waxay ku tarto ha joogtee iayadaa waxyeelo ku gaysanaysa intay doonto haleekaato waxyelaadaasi.
Marka laga hadlaayo cilmiga daawada ama daawaynta, hooyada uurka leh waxay siisay daryeel caafimaad oo gaara iyo tixgalin caafimaad una gaara hooyada uurka leh. Ilaalinta iyo daryeelka caafimad ee hooyada uurka leh iyadoo la ilaalinayo waxa loo qaybiyay dhawr qaybood iaydoo lagu salaynaaayo, baahiyaha caafimad ee hooyada uurka leh (pregnancy category) iyadoo kala ah sidatan.
A) Qaybata A waxa hoos yimaada daaowoyin farabadan waxaana kamida VITAMIN A, B,Ciyo qaybo kamida antibiotics ka, daawoyinkan hooyada uurka leh way qaadan kartaa wax dhib ah kuma keenayso.
B) Qaybta B waxay isku dhowyihiin group A, daawoyinka hoos yimaadana waxa kamida Dhmaam qaybaha VITAMIN B , qaar kamida antibiotics sida AMOXCILLIN.
C) Qaybta C iyana waxaa kamida oo aynu tusaale usoo qaaadan doona daawada loo yaqano CIPROFLOXACIN taas hoos timaada groupka antibiotic ah ee loo yaqaano (fluroquinolone).
Intaanaan ugalin daawooyinka aynu ujeedkeenu yahay ee waxyeelaya hooyada uurka leh iyo ilmaheeda uurjiifkaahba, waxan ka cudur daranayaa in aynaan wada qorikarin dhamaan daawooyinkas oo dhan balse aynu sooqadan doono kuwa kamida, kuwa kale oo ay isku groupka yihiin ay lamidyihiin.
Group D iyo X oo ah kuwa qormadeenu sida tooska ugu saabsantahay ee aad u waxyeeleya hooyada uurka leh iyo waliba ilmaha uurjiifka ah Hadaba waxaynu si toos uguda gali doonaa oo si toosa uga hadlaysa labadii group aynu
kor kusoo xusnay, lana yidhaahdo isku dhafka labada group magacan (TERATOGENES) Waxaynu soo qaadan doonaa daawo kasta iyo waxyeeladay ku keento hooyada uurka leh iyo ilmaha uurkiifka ah.
Daawooyinkii ayaynu toos ugali doonaa aad haloogu fiirsado
CARBOMOZEPINE: waa daawada loo isticmaalo suuxida, hadaba haday hooyadu leedahay xanuunka suuxida uurna ay sido ama ay leedahay waxa ka mamnuua in ay isticmaasho dwadaaas kor ku xusan mudada ay uurka leedahay, sababtoo ah waxay daawadani uurjifka ku keentaa xanuun khatar badan oo loo yaqaano SPINABIFIDA : waxaana dhalanaya ilmo aan lahayn xangula (spinal cord)
TETRACYCYCLINE GROUP: waa group Antibiotics ah, waxaana kamid daawoyinkan aynu hoos ku xisi doono.
Dhamaan groupkan waxay hooyda iyo ilmaha uurjiifka ahba ku keenaan dhibaatooyin badan waxaana kamida kuwan soo socda:
a) Waxa ilmaha markuu dhasho ee uu koro una soobaxaan ilkuhu ay ku keenaan in ay ilkuhu si degdeg ah uga daadatan ilmaha yar, waxaaana looyaqaan (TOOT ENAMEL) ama ilkocaro waxa soomalidu utaqaan in badan oo kamida ah
b) Waxa kale ay sababaan daawooyinkani in ay dhibaato kukeenan koritaanka lafaha ee ilmaha yar markuu uurjiifka yahay iyo markuu dhashaba (delay bone development)
NSAIDS GROUP: waa group daawooyin ah waxaana loo isticmalaa xanuun baabiye (anti pain) waxaana kamida kuwan aynu hoos ku xusi doono
Daawoyinkani waxay ilmaha uurjifka ah ku waxyeeloyin badan waxaana kamid ah Waxay dhibaato ku keenaan habdhismeedka wadnaha iyo xididada dhiiga (cardio vascular system) waxaanay xidhaan daawoyinakani dhuumaha wadnaha (closure of the ducts arterious)
MISOPROSTAL: Daawadani iaydu waxay kamidtahay group( X) groupkana, gabi ahaanba waa ka mamnuuc in ay istimaasho hooyada uurka leh sikastay uga baahato, waxaa kabadan baahiday uqabto dhibaatada ay ku keenayan hooyada iyo ilmaheda uur jiifka ah.
PHENYTOIN: waa mid kamida dooyinka loo qaato neerfaha iyo maskaxda.Daawadani waxay ilmaha uurjiifka ku keentaa inuu ku dhasho isagoo faruuran (cleft lip and palate) waa faruurta dibinta iyo faruurta ilaa dhanxanaga ka gudubta. Hooyadu waa inay ka taxadirtaa qaadshada daawadan intay uurka leedahay.
NB: TALO SOO JEEDIN:
Waxay qormadeenu talo usoo jeedinaysa qofkasta oo ah mihnadle caafimaad ah waliba sigaara inamada pharmacyada ka shaqeeya in aanay raadin kaliya faaido iyo in laga iibsado kiniinka uu hayo ama daawada ee ay waraystaan qofkan ay ka iibinayaa daawada xaladiisa caafimad iyo xaaliadiisa guud haanba, gaar ahaan haweenka fiiro gaara uyeeshaan una tudhaan umadooda
Waa Qalinkii Cabdisaan Maxamed Yuusuf
ALAA MAHAD LEH:
Qaab Jiifka Xilliga Uurka Muhiimada Baamiyuhu uu u Leeyahay Hooyada Uurka Leh Iyo Dadka Macaanka Qaba 8 Arrimood Oo Ay Tahay Hooyada Uurka Leh Inay Ka Taxadarto Muhiimada Vitamin D-gu U Leeyahay Dumarka Uurka Leh & Ilmaha Caloosha Ku Jira